Famindram-po ho an'ny rehetra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Ny hoavy > Famindram-po ho an'ny rehetra
Rehefa amin'ny andro fisaonana, amin'ny 14. Tamin’ny 2001 Septambra , dia tonga nandre teny fampiononana sy fankaherezana ary fanantenana ny olona nivory tany amin’ireo fiangonana nanerana an’i Amerika sy tany amin’ny firenena hafa. Na izany aza, maro amin'ireo mpitarika ny fiangonana kristiana mpandala ny nentin-drazana - mifanohitra amin'ny fikasany hitondra fanantenana ho an'ny firenena ory - dia nampiely tsy nahy ny hafatra izay niteraka famoizam-po, fahakiviana ary tahotra. Izany hoe ho an’ireo olona namoy olon-tiana tamin’ny fanafihana, na havana na namana izay mbola tsy nihambo ho Kristy. Maro ny kristiana fondamentalista sy evanjelika no resy lahatra: na iza na iza maty nefa tsy nibaboka an’i Jesosy Kristy, na dia tsy mbola nandre momba an’i Kristy hatrizay niainany aza, dia ho any amin’ny helo aorian’ny fahafatesana ary hijaly amin’ny fijaliana tsy hay lazaina any — amin’ny alalan’ny tanan’Andriamanitra maneso. nambaran’ny kristiana mitovy amin’ilay Andriamanitry ny fitiavana sy ny fahasoavana ary ny famindram-po. Ny sasany amintsika kristiana dia toa milaza hoe: “Tia anao Andriamanitra”, nefa avy eo dia tonga ilay pirinty tsara indrindra: “Raha tsy manao vavaka fibebahana fototra alohan’ny fahafatesana ianao, dia hampijaly anao mandrakizay ny Tompo sy Mpamonjy be famindram-po”.
Vaovao mahafaly ny filazantsaran’i Jesoa Kristy (Grika euangélion = vaovao mahafaly, hafatry ny famonjena), ary ny “tsara” no asongadina. Izy io ary mijanona ho hafatra mahafaly indrindra amin'ny hafatra rehetra, ho an'ny rehetra. Tsy vaovao mahafaly ihany ho an’ireo olom-bitsy izay nifankahalala tamin’i Kristy talohan’ny fahafatesana; vaovao mahafaly ho an'ny zavaboary rehetra izany - ny olombelona rehetra tsy an-kanavaka, ao anatin'izany ireo izay maty nefa tsy naheno an'i Kristy.
Jesosy Kristy no sorom-panavotana tsy noho ny fahotan’ny Kristiana ihany fa ho an’ny an’izao tontolo izao (1. Johannes 2,2). Ny Mpamorona koa no Mpampihavana ny zavaboariny (Kolosiana 1,15-20). Tsy miankina amin'ny votoatin'ny fahamarinana ny olona mahafantatra an'io fahamarinana io alohan'ny hahafatesany. Miankina amin’i Jesosy Kristy irery ihany izany, fa tsy amin’ny fihetsiky ny olona na ny fihetsiky ny olombelona.
Hoy i Jesosy: “Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay.” (Jaona. 3,16, ny teny nalaina rehetra nohavaozina fandikan-tenin’i Lotera, fanontana mahazatra). Andriamanitra no tia izao tontolo izao, ary Andriamanitra no nanome ny Zanany; ary nomeny izany mba hanavotana izay tiany - izao tontolo izao. Izay mino ny Zanaka izay nirahin’Andriamanitra dia hiditra amin’ny fiainana mandrakizay (tsara kokoa: “ho amin’ny fiainana ho avy”).
Tsy misy fehezan-teny iray voasoratra eto fa io finoana io dia tsy maintsy alohan'ny fahafatesan'ny vatana. Tsia: Milaza ilay andininy fa ny mpino "tsy very", ary satria na ny mpino aza maty, dia tokony ho miharihary fa "very" sy "maty" dia tsy mitovy. Ny finoana no manakana ny olona tsy ho very, fa tsy ho faty. Ny fahaverezan'ny zavatra noresahin'i Jesosy eto, nadika avy amin'ny teny grika appolumi, dia midika fahafatesana ara-panahy fa tsy fahafatesan'ny vatana. Misy ifandraisany amin'ny fandringanana farany, famongorana, fanjavonana tsy misy soritra. Izay mino an'i Jesosy dia tsy hahita fiafarana tsy azo ivalozana toy izany, fa hiditra amin'ny fiainana (soe) amin'ny taona ho avy (aion).
Ny sasany hiditra amin'ny fiainana amin'ny andro ho avy, hiditra amin'ny fiainana any amin'ny fanjakana, raha mbola velona, ​​toy ny mpandeha amin'ny tany. Izy ireo anefa dia tsy maneho afa-tsy vitsy an’isa amin’ny “tontolo” (kosmos) izay tena tian’Andriamanitra ka naniraka ny zanany hamonjy azy. Ary ny ambiny? Ity andininy ity dia tsy midika hoe Andriamanitra dia tsy afaka mamonjy ireo izay maty ara-batana nefa tsy mino.
Ny fiheverana fa ny fahafatesana ara-batana dia hanakana an’Andriamanitra tsy hamonjy olona na hahatonga olona hino an’i Jesosy Kristy indray mandeha, dia fandikana ny olombelona; tsy misy toy izany ao amin’ny Baiboly. Fa hoy kosa isika: maty ny olona, ​​ary rehefa afaka izany, dia hisy fitsarana (Hebreo 9,27). Ny mpitsara, izay tiantsika hotsaroana mandrakariva, dia hisaotra an’Andriamanitra tsy iza fa Jesosy, ilay Zanak’ondrin’Andriamanitra voavono izay maty noho ny fahotan’ny olombelona. Izany no manova ny zava-drehetra.
Mpamorona sy mpampihavana
Avy aiza ilay hevitra hoe ny velona ihany no Andriamanitra fa tsy ny maty? Naharesy ny fahafatesana izy, sa tsy izany? Efa nitsangana tamin’ny maty Izy, sa tsy izany? Andriamanitra tsy mankahala izao tontolo izao; tiany izy. Tsy namorona ny olona ho amin’ny helo Izy. Tonga ara-potoana i Kristy hamonjy izao tontolo izao fa tsy hitsara azy (Jao 3,17).
Tamin'ny 16 septambra, ny alahady taorian'ny fanafihana, dia nilaza ny mpampianatra kristiana iray nanoloana ny kilasin'ny sekoliny alahady: Andriamanitra dia tonga lafatra amin'ny fankahalana toy ny amin'ny fitiavana, izay manazava ny antony misy ny helo ary koa ny lanitra. Ny dualisma (ny hevitra hoe ny tsara sy ny ratsy dia hery roa mifanipaka matanjaka eo amin'izao rehetra izao) dia heresy. Moa tsy voamariny ve fa mamindra ny dualisma ho amin’Andriamanitra izy, fa Andriamanitra mitondra sy maneho ny fihenjanan’ny fankahalana tonga lafatra - fitiavana tonga lafatra?
Andriamanitra dia marina tanteraka, ary ny mpanota rehetra dia tsaraina sy voaheloka, fa ny filazantsara, ny vaovao mahafaly, dia manomboka antsika ho ao amin’ny zava-miafina fa Andriamanitra ao amin’i Kristy dia efa nanaiky izany fahotana izany sy izany fitsarana izany ho antsika! Tena misy tokoa ny afobe ary mahatsiravina. Fa io helo mahatsiravina natokana ho an'ny ratsy fanahy io indrindra no niaretan'i Jesosy ho an'ny olombelona (2. Korintiana 5,21; Matio 27,46; Galatianina 3,13).
Ny olombelona rehetra dia efa niharan’ny sazin’ny fahotana (Romana 6,23), Fa Andriamanitra dia manome antsika ny fiainana mandrakizay ao amin’i Kristy (andininy iray ihany). Izany no antony iantsoana izany hoe: fahasoavana. Hoy i Paoly ao amin’ny toko teo aloha: “Tsy mitovy ny fanomezana sy ny ota. Fa raha ny fahotan'ny anankiray ['ny maro' no matin'ny maro, izany hoe izy rehetra; tsy misy tsy mitondra ny helok’i Adama], mainka fa ny fahasoavan’Andriamanitra sy ny fanomezan’Andriamanitra no omena be dia be ho an’ny maro [indray: izy rehetra, tanteraka amin’ny olona rehetra] amin’ny alalan’ny fahasoavan’ny olona iray, dia Jesosy Kristy » (Romana). 5,15).
Hoy i Paoly: Na dia mafy aza ny famaizana antsika noho ny ota, ary mafy dia mafy izany (any amin’ny helo ny fitsarana), na izany aza dia mitana seza aoriana ny fahasoavana sy ny fanomezana ny fahasoavana ao amin’i Kristy. Raha lazaina amin’ny teny hafa, ny tenin’Andriamanitra momba ny sorompanavotana ao amin’i Kristy dia mafy tsy manam-paharoa noho ny teny fanamelohana nataony tao amin’i Adama - ny iray dia maty tsy tra-drano noho ny an’ny iray hafa (“tsy mainka”). Noho izany dia afaka miditra ao amin'i Paoly isika 2. Korintiana 5,19 Lazao hoe: Tao amin’i Kristy “[Andriamanitra] dia nampihavana izao tontolo izao [ny olona rehetra, ny ‘maro’ ny Romana. 5,15] miaraka amin'ny tenany ary tsy nametraka ny fahotany ho azy ireo [indray] ... »
Ny fiverenana amin’ireo sakaiza sy olon-tiana izay maty tsy nihambo ho mino an’i Kristy, moa ve ny filazantsara dia manome fanantenana ho azy ireo, na mampahery ny amin’izay hiafaran’ireo maty malalany? Eny tokoa, ao amin’ny Filazantsaran’i Jaona, dia milaza ara-bakiteny toy izao i Jesosy: “Ary Izaho, rehefa asandratra hiala amin’ny tany, dia hitaona ny rehetra hanatona Ahy.” ( Jaona 12,32). Vaovao tsara izany, ny fahamarinan’ny filazantsara. Tsy nametraka fandaharam-potoana i Jesosy, fa nambarany kosa fa tiany hisarika ny olona rehetra, tsy ny olom-bitsy izay nahavita nahafantatra azy talohan’ny nahafatesany, fa ny olon-drehetra mihitsy.
Tsy mahagaga raha nanoratra ho an’ny Kristianina tao amin’ny tanànan’i Kolosia i Paoly fa “ankasitrahan’Andriamanitra”, tsarovy: “ankasitrahanao”, fa tamin’ny alalan’i Kristy dia “nampihavana ny zavatra rehetra taminy Izy, na ety an-tany, na any an-danitra, ka nanao fihavanana tamin’ny alalan’i Kristy. ny rany teo amin’ny hazo fijaliana » (Kolosiana 1,20). Vaovao mahafaly izany. Ary, araka ny nolazain’i Jesosy, dia vaovao tsara ho an’izao tontolo izao izany, fa tsy ny olom-boafidy voafetra ihany.
Tian’i Paoly ho fantatry ny mpamaky fa io Jesosy io, ilay Zanak’Andriamanitra natsangana tamin’ny maty, dia tsy mpanorina ara-pivavahana vaovao mahaliana fotsiny izay manana eritreritra ara-teôlôjia vaovao vitsivitsy. Nilaza tamin’izy ireo i Paoly fa i Jesosy dia tsy iza fa ilay Mpamorona sy Mpanohana ny zava-drehetra (and 16-17), ary mihoatra noho izany, fa Izy no fomban’Andriamanitra hanitsiana tanteraka ny zava-drehetra teo amin’izao tontolo izao hatramin’ny niandohan’ny tantara. (and 20)! Ao amin'i Kristy - hoy i Paoly - Andriamanitra dia manao ny dingana faratampony amin'ny fanatanterahana ny teny fikasana rehetra natao tamin'ny Isiraely - dia mampanantena fa indray andro any, amin'ny asa fahasoavana madio, dia hamela ny fahotana rehetra Izy, amin'ny ankapobeny sy amin'ny ankapobeny, ary havaozina ny zava-drehetra (jereo ny Asan'ny Apostoly 1.3,32- enina ambin'ny folo; 3,20-21; Isaia 43,19; Apok 21,5; Romana 8,19- iray).
Ny kristiana ihany
"Fa ny famonjena dia natao ho an'ny Kristiana ihany", hoy ny fidradradradran'ireo fundamentalista. Azo antoka fa marina izany. Iza anefa ireo “Kristianina”? Moa ve ireo manao fibebahana manara-penitra sy vavaka fiovam-po? Ireo natao batisa asitrika ihany ve? Ireo izay ao amin’ny “tena fiangonana” ihany ve? Ireo izay mahazo famotsoran-keloka avy amin’ny pretra voatokana ara-dalàna ihany? Izay efa tsy nanota intsony? (Tafita ve ianao? Tsy afaka aho.) Ireo izay mahafantatra an’i Jesosy ihany alohan’ny hahafatesany? Sa Jesosy mihitsy - izay nametrahan'Andriamanitra fitsarana ny tànany voatsindrona hoho - no manapaka amin'ny farany hoe iza no anisan'ny faribolan'ireo izay anehoany fahasoavana? Ary rehefa tonga eo izy: Moa ve izy manapa-kevitra hoe iza no nandresy ny fahafatesana sy iza no afaka manome ny fiainana mandrakizay ho an’izay tiany, ary koa rehefa mampino olona iray, na mifankahita isika, ireo mpiaro ny fivavahana marina rehetra mba handray an’io fanapahan-kevitra io eo amin’ny toerany. ?
Ny kristiana tsirairay dia efa nisy fotoana lasa Kristianina, izany hoe nentin’ny Fanahy Masina ho amin’ny finoana. Ny toeran’ny fondamentalista anefa dia toa hoe tsy hain’Andriamanitra ny mampino ny olona iray rehefa maty izy. Andraso anefa fa Jesosy no manangana ny maty. Ary Izy no sorom-panavotana, tsy noho ny fahotantsika ihany fa noho ny an’izao tontolo izao (1. Johannes 2,2).
“Fa ny fanoharana momba an’i Lazarosy”, hanohitra ny sasany. "Tsy i Abrahama ve no milaza fa misy elanelana lehibe sy tsy azo tetezana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany amin'ilay mpanankarena?" (Jereo ny Lioka 16,19-31.)
Tsy tian’i Jesosy ho raisina ho toy ny famaritana sary momba ny fiainana aorian’ny fahafatesana io fanoharana io. Firy amin’ny Kristianina no hilazalaza ny lanitra ho “an-tratran’i Abrahama”, toerana tsy ahitana an’i Jesosy na aiza na aiza? Hafatra ho an’ny kilasin’ny Jodaisma tamin’ny taonjato voalohany ilay fanoharana, fa tsy sarin’ny fiainana aorian’ny fitsanganana amin’ny maty. Alohan’ny hamakiantsika zavatra bebe kokoa noho izay napetrak’i Jesosy ao anatiny, dia aoka isika hampitaha izay nolazain’i Paoly ao amin’ny Romana 11,32 manoratra.
Mbola tsy nibebaka ilay mpanankarena tao amin’ilay fanoharana. Mbola mihevitra ny tenany ho ambony noho i Lazarosy izy. Mbola tsy hitany afa-tsy i Lazarosy ho olona manompo azy. Ara-drariny angamba ny fiheverana fa ny tsy finoan'ilay mpanankarena no nahatonga ny hantsana tsy azo resena, fa tsy ny filana ara-tontolo iainana tsy ara-dalàna. Aoka hotsaroantsika: Jesosy mihitsy, ary Izy irery ihany, no manidy ny elanelana tsy azo resena eo amin’ny toetrantsika mpanota sy ny fihavanana amin’Andriamanitra. Ity hevitra ity, ity teny ao amin’ny fanoharana ity - fa amin’ny alalan’ny finoana Azy ihany no hahazoana famonjena-dia nosoritan’i Jesosy hoe: “Raha tsy mihaino an’i Mosesy sy ny mpaminany hianareo, dia tsy ho resy lahatra koa, na dia misy mitsangana avy ao amin’ny tempoly. ny maty” (Lioka 16,31).
Ny tanjon’Andriamanitra dia ny hitarika ny olona ho amin’ny famonjena, fa tsy ny hampijaly azy. Mpampihavana i Jesosy, ary mino izany na tsia, manao asa tena tsara izy. Izy no Mpamonjy izao tontolo izao (Jao 3,17), fa tsy ny Mpamonjy ny ampahany amin’izao tontolo izao. “Fa toy izany no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao” (and 16) – fa tsy olona iray ao anatin’ny arivo. Manana lalana Andriamanitra, ary ambony noho ny lalantsika ny lalany.
Hoy i Jesosy tao amin’ny Toriteny teo An-tendrombohitra: “Tiava ny fahavalonareo.” (Mat 5,43). Azo atao ny mihevitra fa tia ny fahavalony izy. Sa tokony hino ny olona iray fa mankahala ny fahavalony i Jesosy, nefa mitaky ny hitiavantsika azy, ary ny fankahalany dia manazava ny antony misy ny afobe? Tena hadalana tokoa izany. Miantso antsika ho tia ny fahavalontsika i Jesosy satria manana izany koa izy. «Raiko ô, mamelà ny helony; satria tsy fantany izay ataony!" Izy no fifonana ho an’izay nanombo Azy (Lioka 23,34).
Azo antoka fa izay mandà ny fahasoavan’i Jesosy na dia efa fantany aza dia hijinja ny vokatry ny hadalany amin’ny farany. Ho an’ireo izay mandà tsy hanatona ny Fanasan’ny Zanak’ondry, dia tsy misy toerana hafa afa-tsy ny haizina tanteraka (iray amin’ireo teny ara-panoharana nampiasain’i Jesosy hilazana ny toetry ny fanalavirana an’Andriamanitra, izay lavitra an’Andriamanitra; jereo ny Matio 2.2,13; 25,30).
Ao amin'ny Romana (11,32) Nanao izao fanambarana mahagaga izao i Paoly: “Fa Andriamanitra nanidy ny olona rehetra tamin’ny tsy fankatoavana, mba hamindrany fo amin’izy rehetra”. Raha ny marina, ny teny grika tany am-boalohany dia manondro ny rehetra, tsy ny sasany, fa ny rehetra. Mpanota ny rehetra ary aseho amin’ny rehetra ao amin’i Kristy ny famindram-po, na tiany na tsy tiany; na ekeny na tsia; na fantatr'izy ireo alohan'ny fahafatesana na tsia.
Inona no mbola azon'ny olona lazaina momba ity fanambarana ity noho izay lazain'i Paoly ao amin'ny andininy manaraka: "Endrey ny halalin'ny haren'ny harena sy ny fahendren'Andriamanitra! Tsy takatry ny saina ny fitsarany ary tsy takatry ny saina ny lalany! Fa 'iza no nahalala ny sain'ny Tompo, ary iza no mpanolo-tsaina azy?' Na 'iza no nanome azy zavatra mialoha mba hamalian'Andriamanitra azy?' Fa Izy no nihavian'ny zavatra rehetra, ary Izy no nihavian'ny zavatra rehetra. Voninahitra ho azy mandrakizay! Amena »(andininy 33-36).
Eny, toa tsy takatry ny saina ny lalany ary maro amin'ny Kristiana no tsy mino fa tsy afaka tsara ny filazantsara. Ary ny sasany amintsika dia toa mahafantatra tsara ny hevitr'Andriamanitra ka fantatsika tsotra izao fa na iza na iza tsy kristiana amin'ny fahafatesana dia mandeha any amin'ny afobe. I Paul kosa etsy andaniny te-hanao mazava fa ny fahazoan'ny fahasoavana masina tsy takatry ny saina dia tsy takatry ny saintsika fotsiny - zava-miafina izay tsy nambara tao amin'i Kristy ihany: Tao amin'i Kristy dia nanao zavatra mihoatra ny haavon'ny olombelona any an-danitra.
Ao amin’ny taratasiny ho an’ny Kristianina tany Efesosy, i Paoly dia milaza amintsika fa efa nokasain’Andriamanitra hatramin’ny voalohany izany (Efesiana). 1,9-10). Izany no antony fototra niantsoana an’i Abrahama, ho amin’ny nifidianana an’i Isiraely sy Davida, ho an’ny fanekena (3,5-6). Mamonjy ny “vahiny” sy ny tsy Isiraelita koa Andriamanitra (2,12). Mamonjy ny ratsy fanahy aza Izy (Romana 5,6). Izy no mitaona ny olona rehetra ho eo aminy ara-bakiteny (Jaona 12,32). Ao amin’ny tantaran’izao tontolo izao manontolo, ny Zanak’Andriamanitra dia miasa “ao ambadika” hatrany am-piandohana ary manao ny asa fanavotana amin’ny fampihavanana ny zavatra rehetra amin’Andriamanitra (Kolosiana). 1,15-20). Ny fahasoavan’Andriamanitra dia manana ny lojikany, lojika izay toa tsy mitombina matetika amin’ny olona misaina ara-pivavahana.
Ny lalan tokana mankany amin'ny famonjena
Raha fintinina: Jesosy no hany lalana mankany amin’ny famonjena, ary mitaona ny olona rehetra hanatona Azy tanteraka Izy - amin’ny fombany, amin’ny fotoany avy. Tena ilaina ny manazava ny zava-misy, izay tena tsy takatry ny sain’olombelona mihitsy: Tsy misy na aiza na aiza eto amin’izao rehetra izao afa-tsy ao amin’i Kristy, satria, araka ny voalazan’i Paoly, dia tsy misy na inona na inona izay tsy noforoniny ka tsy misy ao aminy (Kolosiana). 1,15-17). Ny olona izay mandà azy amin’ny farany dia manao izany na dia eo aza ny fitiavany; tsy Jesosy no nanda azy ireo (tsy - tia azy Izy, maty ho azy ireo ary namela azy ireo), fa nandà Azy izy ireo.
Hoy i CS Lewis: "Amin'ny farany dia tsy misy afa-tsy karazan'olona roa: ireo izay miteny amin'Andriamanitra hoe:« Hatao anie ny sitraponao »ary ireo izay niafaran'Andriamanitra nilaza hoe" Hatao ny ANAO ". Na iza na iza any amin'ny helo dia nifidy an'io anjara io ho an'ny tenany. Raha tsy misy io fanapahan-kevitra io, dia tsy hisy ny helo. Tsy misy fanahy mitady fifaliana amin-kafanam-po sy tsy mitsahatra tsy ho diso izany. Izay mitady no mahita. Izay mandondòna dia hovohana ”(The Great Divorce, Chapter 9). (1)
Ny mahery fo any amin'ny afobe?
Rehefa nolazaiko tamin’ny Kristianina ny dikan’ny 11. Rehefa nandre ny fitoriana tamin’ny Septambra aho, dia tsaroako ireo mpamono afo sy polisy mahery fo izay nanao sorona ny ainy tamin’ny fiezahana hamonjy ny olona tao amin’ny World Trade Center nirehitra. Ahoana no ifanarahan’izany: antsoin’ny Kristianina ho mahery fo ireo mpamonjy ireo ary mitehaka amin’ny herim-pony nanao sorona, nefa etsy ankilany kosa, manambara fa raha tsy nitonona an’i Kristy talohan’ny nahafatesany izy ireo, dia hampijalina any amin’ny helo?
Ny filazantsara dia manambara fa misy fanantenana ho an’izay rehetra maty tao amin’ny Foibe Ara-barotra Iraisam-pirenena nefa tsy nitonona an’i Kristy aloha. Ny Tompo nitsangana tamin’ny maty no hihaona amin’izy ireo aorian’ny fahafatesana, ary Izy no mpitsara – izy, miaraka amin’ireo loaka fantsika eny an-tanany – vonona mandrakizay hamihina sy handray ny zavaboariny rehetra izay manatona Azy. Namela ny helok’izy ireo Izy talohan’ny nahaterahany (Efesiana 1,4; Romana 5,6 ary 10). Vita izany anjara izany, ho antsika izay mino ankehitriny koa. Ireo izay mijoro eo anatrehan’i Jesosy ankehitriny dia tsy maintsy mametraka ny satroboninahitra eo anoloan’ny seza fiandrianana sy manaiky ny fanomezany. Mety tsy hanao izany ny sasany. Angamba efa latsa-paka amin’ny fitiavan-tena sy ny fankahalana ny hafa izy ireo ka hahita ny Tompo nitsangana tamin’ny maty ho fahavalony lehibe. Mihoatra noho ny henatra izany, loza mitatao amin'ny cosmic satria tsy fahavalonao izy. Satria tiany izy, na izany aza. Satria tiany ny hanangona azy eo an-tsandriny toy ny reniakoho ny zanany, raha avelan'izy ireo fotsiny.
Fa avela isika - raha manana Romana 14,11 ary ny Filipiana 2,10 minoa - eritrereto fa ny ankamaroan'ny olona maty tamin'io fanafihan'ny mpampihorohoro io dia hihazakazaka amim-pifaliana eo an-tsandrin'i Jesosy toy ny zaza eo an-trotroan'ny ray aman-dreniny.
"Jesosy mamonjy" no soratan'ny Kristianina amin'ny afisy sy ny stickers. Marina izany. Izy no manao izany. Ary Izy no Mpandoha sy Mpanatontosa ny famonjena, Izy no niandohan’ny zavaboary rehetra sy ny zavaboary rehetra, anisan’izany ny maty. Andriamanitra tsy naniraka ny Zanany ho amin’izao tontolo izao hitsara izao tontolo izao, hoy i Jesosy. Naniraka Azy Izy hamonjy izao tontolo izao (Jao 3,16- iray).
Na inona na inona lazain'ny sasany, Andriamanitra dia te-hamonjy ny olona rehetra tsy an-kanavaka (1. Timoty 2,4; 2. Petrus 3,9), fa tsy vitsivitsy fotsiny. Ary inona koa no tokony ho fantatrao - tsy milavo lefona izy. Tsy mitsahatra mitia izy. Tsy mitsahatra ny maha-izy azy sy ny maha-izy azy ary ny ho an'ny olona foana izy - ny mpamorona sy ny fampihavanana. Tsy misy olona mianjera amin'ny harato. Tsy nisy olona natao hankany amin’ny helo. Raha misy olona mankany amin'ny helo - any amin'ny zoro kely, tsy misy dikany, tsy misy maizina amin'ny faritra mandrakizay - izany dia noho izy tsy nety nanaiky ny fahasoavana nomanin'Andriamanitra ho azy. Ary tsy hoe satria mankahala azy Andriamanitra (tsy manao izany). Tsy hoe mamaly faty Andriamanitra (tsy izy). Fa satria izy 1) mankahala ny fanjakan’Andriamanitra sy mandà ny fahasoavany, ary 2) satria tsy tian’Andriamanitra hanimba ny fifalian’ny hafa izy.
Ny filazantsara dia hafatry ny fanantenana ho an'ny rehetra. Ny mpitory kristiana dia tsy voatery hiasa amin'ny fandrahonana afobe mba hanerena ny olona hiova an'i Kristy. Azonao atao ny manambara ny fahamarinana, ny vaovao tsara: «Tia anao Andriamanitra. Tsy tezitra aminao izy. Maty ho anao Jesosy noho ny maha mpanota anao, ary tia anao loatra Andriamanitra ka mamonjy anao amin'ny zavatra rehetra manimba anao. Ka maninona ianao no te-ho velona tsy misy hafa afa-tsy ny tontolo mampidi-doza, lozabe, tsy mahatanty ary tsy manam-pitiavana? Maninona ianao no mandeha ary manomboka mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra ary manandrana ny fitahian'ny fanjakany? Efa azy ianao. Izy dia efa nanonitra ny fahotanao. Hampody ny alahelonao ho fifaliana Izy. Homeny anao fiadanam-be izay tsy mbola fantatrao akory izy. Hitondra dikany sy fandaharana eo amin'ny fiainanao izany. Hanampy anao hanatsara ny fiarahanareo izany. Izy hanome anao fitsaharana. Matokia azy. Miandry anao izy. »
Tena tsara ilay hafatra ka miboiboika avy amintsika ara-bakiteny. Amin’ny Romana 5,10-11 Hoy i Paoly: “Fa raha nampihavanina tamin’Andriamanitra isika tamin’ny nahafatesan’ny Zanany, fony mbola fahavalontsika, mainka ny hamonjena antsika amin’ny fiainany, rehefa nampihavanina isika. Ary tsy izany ihany, fa Andriamanitra koa no reharehantsika amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika, Izay nahazoantsika fihavanana ankehitriny”.
Ny farany amin'ny fanantenana! Farany amin'ny fahasoavana! Amin'ny alàlan'ny fahafatesan'i Kristy dia mampihavana ny fahavalony Andriamanitra ary mamonjy azy amin'ny ain'i Kristy. Tsy mahagaga raha afaka manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika isika - amin'ny alalany dia efa anjaran'izay lazaintsika amin'ny olon-kafa isika. Tsy mila miaina intsony izy ireo, toy ny hoe tsy manana fitoerana eo amin'ny latabatr'Andriamanitra; efa nampihavaniny izy ireo, afaka mody izy ireo afaka mody.
Kristy mamonjy mpanota. Tena vaovao tsara izany. Ny tsara indrindra azon'ny olombelona dia henoina.
Nataon'i J. Michael Feazell